IINGCAMANGO ZEPAVER PATIO (ISIKHOKELO SOYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Iingcamango zePaver Patio (Isikhokelo soYilo)
Iingcamango zePaver Patio (Isikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwigalari yethu entle yeemvo zepatiyodi ezibandakanya ilitye, isitena kunye noyilo lwe-DIY eyadini lakho.
Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni ipatio yepativer yenza utyalo-mali olukhulu kwikhaya. Ngaphandle kokonyusa isibheno sobuhle kwiyadi yakho yangasemva, iipatios zeparaver nazo ziza nezibonelelo ezininzi ezibonakalayo ezibandakanya ukuzinza kunye nokomelela okuqatha ngokuchasene nokunxiba.
Apha ngezantsi, sijonga isikhokelo sethu sokugqibela kuyo yonke into nayo yonke into oyifunayo malunga nezimvo zepavivas, kunye nolunye uyilo olugqwesileyo oluza kukugcina uphefumlelwe njengoko usakha elinye ikhaya lakho.
Imibala eqhelekileyo yePavers
Isitena seParao Patio
IPatio yePadi ye-DIY
Paver Ixabiso lePatio
Iindleko zePaver Patio ngeenyawo zenyawo nganye
Ixabiso lePavers ngokuxhomekeke kuhlobo lwezixhobo
Ixabiso eliPhakathi leParao Patio
Ixabiso eliPhakathi lokufaka iPatio yeBrick Brick ngoSayizi
Ixabiso lePatio yePati yeZitena
Ixabisa malini ukufaka iPaver Patio
Iipateni zePatio Paver
Ukubaleka kwePateni yeBond
Ipatheni yabalandeli baseYurophu
Stack Bond Ukugcina iipateni
Ipeyinti yokuGcina iYunifomu
Ipateni yokuGcina ngokungaqhelekanga
Uyilo lwePatio Patio
I-Paver kunye ne-Mulch Patio
Paver Kwaye Ingca Patio
Amanyathelo ePavel Patio
Paver Patio NgePergola
IPhuli yePatio yePaver
Paver Patio kunye nePavilion
IPatio encinci yePaver
Paver Patio Ngomlilo Umngxuma
Ikhonkrithi Vs Paver Patio
Ukufakwa kwePavido yePatio
Uyifaka njani iPavers
Isiseko sePatio Paver
Inkqubo yokuhambisa amanzi yePaido Patio
Ugcino lwePaver Patio
Isigcini sePatio Paver
Iikiti zePatio Paver
Yintoni ilitye le Paver? I-paver okanye i-paver ilitye liqhekeza lelitye, ithayile, isitena okanye ikhonkrithi esetyenziswa ngokuqhelekileyo njengomgangatho wangaphandle. Iveliswa ngokugalela umxube wekhonkrithi kwisikhunta esivumela ukuba sibeke. Ngokwesiqhelo ziza ngesikwere okanye imilo yoxande kwaye zize kubukhulu obuqhelekileyo kunye nobungaqhelekanga, kuxhomekeke kuhlobo lwezinto ezisetyenzisiweyo kwimveliso yazo. Ngaphandle kwekhonkrithi, iipaventi zinokwenziwa ngamatye endalo okanye udongwe kwaye ziza ngobukhulu obahlukeneyo, iimilo, imibala kunye nemibala.
Amanqwanqwa maxa wambi kubhekiswa kuwo njengelitye lokufakelwa okanye isitena esomileyo esibekiweyo ikakhulu ngenxa yendlela efakwe ngayo. Ezi zinokubekwa kwiipateni ezahlukeneyo kwaye zihlala zisetyenziswa ngaphandle njengeepatios, iidriveways, iiphuli zedama, imingxunya yomlilo, iilana, iibhalkhoni, izixhobo zokutyala kunye neendlela zokuhamba. Ngaphandle kwezicelo zokuhlala, iipeyinti zikwasetyenziswa ngokubanzi kwizicelo zangaphandle zorhwebo.
Olona phawu lubalaseleyo okanye umgangatho wepavile zizinto ezenziwe ngazo. Ngokubanzi, iipavile zinokwahlulwa zibe ziindidi ezimbini eziphambili, ezizezi zokubhabha zendalo kunye neepavive ezenziweyo.
Iipavile zendalo kukwabhekiswa kuzo njengesiqhelo Iiplanga zamatye. Ngokungafaniyo neepeyinti zekhonkrithi kunye nezona zinto zininzi zokubekwa ngezitena, olu hlobo lweepheyinti zinobungakanani obungalinganiyo kunye neemilo kuba amatye ayaqingqwa emigodini. Banokuhluka okwahlukileyo ngobukhulu, ubume kunye nombala obongeza kumgangatho wabo owahlukileyo kunye nobuhle obahlukileyo. Bona eminye imizekelo yendalo izimvo zepatio zamatye Apha.
Iindidi ezahlukeneyo zamatye aMatye
Zininzi iintlobo zamatye okuphehla amatye kwaye phantse naluphi na uhlobo lwamatye lunokwenziwa lube lunye. Nangona kunjalo, zintathu iintlobo zayo eziqhelekileyo, ezizezi, ibluestone, ilitye lecobble kunye netravertine. Ngaphandle kolu khetho, unokufumana amanye amatye endalo afana nesileyiti, ilitye lekalika kunye negranite.
IBluestone lilitye lendalo elenziwe ngesanti kunye namanye amasuntswana. Igama lalo lithatyathwe kumbala wayo omdaka ngombala ongwevu ongafaniyo nelinye ilitye lendalo. Olu hlobo lwelitye lentlabathi luqhele ukusetyenziswa ekwenziweni kweendlela ezintle kunye neepatio.
I-Bluestone iza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu- inokutyunyuzwa igrabile, isikwe kwiipateni ezahlukeneyo, iveliswe kwiifom zethayile okanye ishiywe kwiizilebhu ezinkulu. Ungayisebenzisa wedwa okanye uyidibanise nezinye izinto zeepavingi ukwenza uyilo lwakho lube nomdla ngakumbi.
Eziluncedo: I-Bluestone izinzileyo kwaye ihlala ixesha elide. Njengoko sele kukhankanyiwe, ibhetyebhetye ngokwemiqathango yoyilo kuba inokwenziwa kwiimilo ezahlukeneyo. Ngaphezulu kwayo yonke into, owona mgangatho uxabisekileyo ngumbala wayo owahlukileyo wobuhle kunye nombala owahlukileyo-umbala wawo uhlala uqala ngombala ohlaza okwesibhakabhaka otshintsha ube ngumbala ongwevu okhanyayo njengoko esiba ngokukhanya ngakumbi kwelanga. Ke ngokusisiseko, i-bluestone pavers age ngobubele
Bendlela: Ukuphela kwento eya kubuyela kwi-bluestone pavers ngamaxabiso abo abizayo. I-bluestone eyiyo inqabile kwaye inokuba yindleko ukuyifumana. Kuya kufuneka ulumke xa uzithenga kuba abanye abathengisi badlulisa izinto zomgunyathi njenge-bluestone eyiyo.
I-Cobblestone ibhekisa kwiibhloko ezincinci zezinto ezenziwe ngelitye lendalo, zihlala ziyigranite, kodwa ngamanye amaxesha zenziwe ngelitye lekalika, ibasalt okanye amanye amatye endalo. Eyaziwa kakhulu ngokuba nomtsalane wehlabathi elidala, i-cobblestone pavers sele ijikeleze iinkulungwane. Ngokwembali, amatye akudala enziwa ngamatye aqokelelweyo aqokelelwa kwiibhedi zomjelo.
Eziluncedo: Owona mgangatho uphakamileyo wamatye okubamba ngamatye kukuqina kwawo okude kakhulu kunye nexesha elide lokuphila. Iipakethi zeCobblestone zomelele kwaye zithembekile kangangokuba zinokuhlala kangangamakhulu eminyaka. Ngapha koko, iindlela zembali kunye neendlela ezenziweyo ezivela kwezi zinto zakudala zisahleli zihleli unanamhla. Ukongeza kwihlabathi lazo elidala elinomtsalane, i-cobblestone nayo yongeza kwixabiso lakho lasekhaya.
Bendlela: Olona phawu lukhulu ekubuyiseleni amatye exabiso lixabiso lawo elibizayo. Ngaphandle kokunjalo, ikwafuna inkqubo yokufaka abasebenzi ngamandla. Kuba lilitye elityebileyo lendalo, liza ngobukhulu obungalinganiyo kunye neemilo ezihlala zikhokelela kumhlaba ongathandekiyo nongalinganiyo.
Eyaziwa njengeyona nto iyintandokazi yokwakha yamaRoma, iTravertine, olunye uhlobo lwamatye endalo lukwasetyenziswa njengepavile. I-Travertine luhlobo lwelitye le-limestone sedimentary elenziwa phantsi kotshintsho lobushushu kunye noxinzelelo. Le nkqubo iyinika ukubonakala okungaqhelekanga kunye nomlingiswa-umphezulu wayo uzaliswe yimingxunya encinci kunye ne-grooves kwaye ihlala ibhalwe ngaphezulu kunelinye ilitye lendalo. Ngenxa yobuhle bayo bendalo kunye nesibheno esingaphelelwa lixesha, iye yaba yenye yezona zinto zintathu ziphakamileyo ezisetyenziselwa ukulungiswa komhlaba kunye nomgangatho ongaphantsi.
Eziluncedo: I-Travertine iyindalo yonke kunye ne-Eco kunye nobume bendalo. Ngaphandle kokuhlala ixesha elide kakhulu, ime kakuhle kukuvezwa kukutshintsha kwemozulu. Ayipheli kwaye ibenombala kwaye ikwabufudumeza ubushushu kakuhle, ke ilungile nakumaxesha ashushu ashushu njengehlobo. Iipavila zeTravertine zikwakhona ngokubanzi kwaye ziza kwiithoni ezahlukeneyo kunye nemibala. Zikwabiza kancinane kuneemabhile, kodwa zinika ubuchwephesha obukhethekileyo kunye nesibheno esihle.
Bendlela: Nangona ii-paverterine pavers zihlala zomelele kakhulu, zisenokuba semngciphekweni wezinto ezininzi. Inobuzaza kakhulu kwiiasidi, ngoko ukuyicoca ngeviniga okanye ifomula eneasidi isenokungabi ngumbono olungileyo njengoko inokushiya ibala kumphezulu wayo. Ukuphatha nako kunokuba ngumceli mngeni kuba kunzima kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iipavile ezinje ngebluestone okanye iflegi yelitye.
I-Flagstone luhlobo lwelitye le-sedimentary. Inqunywe kwilitye elakhiwe ngamatye kwaye ihlala iza neemilo ezizodwa ezidibana njengephazili. Olu hlobo lwelitye lendalo linemibala eyahlukileyo eyahlukileyo ukusuka kwimibala engwevu ukuya kwiitoni ezibomvu ezishushu.
Eziluncedo: Amatye okubamba eFlagstone ahlala ixesha elide kwaye ahlala ixesha elide kunokubekwa kwikhonkrithi. Kukhuselekile ngokupheleleyo ukuba kungasetyenziswa njengesixhobo sophahla esingaphandle kuba sinendawo engaphezulu engatyibilikiyo kunye nomphezulu xa kuthelekiswa nezinye iindawo ezininzi zomhlaba. Abufunxi ubushushu kwaye bahlale bepholile okwenza ukuba ibe zizinto ezifanelekileyo zokubeka umgangatho kwiipatio okanye kwiiyadi ezivezwe lilanga.
Ukwahluka kukwayenye yeempawu eziqinileyo zelitye. Kuba olu hlobo lweepheyile luza ngeendlela ezahlukeneyo, imibala kunye nobukhulu, abanini khaya banokuzama ngokukhululekileyo kwipateni yayo. Unokudibanisa ngokulula kunye nolunye uhlobo lwezixhobo. Fumana ngakumbi izimvo zepati Apha.
Bendlela: Xa kuthelekiswa nezinye izinto ezinje ngezitena kunye nekhonkrithi, iipavumente zelitye zincinci ukuba zizenza izinto ezingafanelekanga kwiidriveways. Njengayo nayiphi na enye ipavile yendalo, ilitye leflegi linezitenxo kwaye alinabungakanani nobukhulu obufanayo. Xa kuziwa kwindleko, iipavumente zelitye lexabiso nazo zibiza kakhulu xa kuthelekiswa nezinye izinto kuba ziyimbiwa kwaye zithuthwa zisuka kowona mthombo.
Nangona ixhaphake kakhulu njengezinto zangaphantsi zangaphakathi, ungafumana iipaneli zemabhile ezifanelekileyo ukusetyenziswa kwangaphandle. Imarble luhlobo lwelitye lendalo elenziwa xa ilitye lekalika liveliswa kukushisa okuphezulu kakhulu kunye noxinzelelo. Le nkqubo yaphazamisa iikristali elityeni, yanika inkangeleko eyahlukileyo elawulwa yimithambo ethe saa.
Iimpawu zemarble zihlala zisetyenziswa kwiindawo zokuhlala ezinje ngeepatios, iindlela zokuhamba, iindlela zokuhamba, imihlaba kunye neendlela.
Eziluncedo: Iimpawu zemarble zaziwa kakhulu ngobuhle bazo kunye ne-aura entle. Inokugqitywa okugudileyo okungenza kwangoko ukuba kwenziwe indawo ephucukileyo. Ukongeza kwinkangeleko yayo eyahlukileyo kunye nobuhle bendalo obahlukileyo, iipavile zemarmore zikwomelele kakhulu kwaye zihlala ixesha elide. Iimpawu zemarble zinokongeza ixabiso ekhayeni lakho.
Bendlela: Nangona i-marble ihlala ihleli, ithambile xa ithelekiswa namanye amatye endalo, yiyo loo nto umphezulu opholileyo unokukrwempa ngokulula njenge-travertine, inovakalelo kwiasidi kwaye inomdla wokudyobha okanye ukuveza umbala xa ivezwe kwimichiza ethile nakwiimveliso zokucoca. I-Marble ikwangumqhubi wendalo, ke olu hlobo lwepeyinti luyabuthatha ngokulula ubushushu kwaye lushushu ngexesha lasemva kwemini nangexesha lokushushu.
Iipavile ezenziwe ziveliswa ngoomatshini kwimizi-mveliso. Ziqulathe ngokwazo izihlanganisi ezicolekileyo nezirhabaxa- zihlala zixubene nezinto zendalo okanye izinto zokwenziwa. Xa kuthelekiswa nokubekwa kwendalo, iipavile ezenziweyo zinobuninzi obufanayo kunye nobume. Enye yeendidi zayo ezidumileyo kukunxibelelana ngeepheyile.
Iiparethi zekhonkrithi yenye yezona zinto zidumileyo zomgangatho osetyenziselwa ukuqhuba, iindlela kunye neendlela zokuhamba. Iipavile zekhonkrithi zenziwe ngesamente kunye nezinto ezidityanisiweyo ezigalelwa kubumbeko ukuze zithathe iimilo ezahlukeneyo. Olu hlobo lwezinto zepavingi zinembonakalo yendalo kunye nobuhle obuncinci.
Ukufakwa kweepavile zekhonkrithi kubandakanya inkqubo ethe ngqo. Zihlala zibekwa ngaphezulu komhlaba kunye nesanti. Ubungakanani bayo nobume bayo bufana, inokunqunyulwa ngokulula nayo.
Eziluncedo: Iipavile zekhonkrithi zaziwa kakhulu ngokuzinza kwayo, uzinzo kunye nokusebenza ngokuchaseneyo. Ezi zikwimeko yemozulu kwaye zinokumelana nokusetyenziswa okunzima ekuhambeni kwexesha. Ukongeza, iipavile zekhonkrithi kulula ukuzifaka kwaye zitshiphu kunezinye izinto ezinokubekwa ephepheni kuba zisebenzisa izinto zokwenza izinto ngexabiso eliphantsi. Ziza ngemibala eyahlukeneyo, iimilo, ubukhulu kunye nezinyuko, kodwa zinokuphinda zenziwe ngokwezifiso nangayiphi na indlela oyifunayo, ezenza ukuba zenziwe ngeendlela ezahlukeneyo kuyilo.
Bendlela: Nangona zomelele, iipavile zekhonkrithi zisenotyekelo lokuqhekeka phantsi kotshintsho olukhulu kubushushu. Ikhonkrithi iyangena, oko kuthetha ukuba amanzi anokuhamba ngaphezulu komhlaba, ke kuyakufuneka utywinwe ukuze wandise ubomi bayo. Olu londolozo longezelelekileyo liguqulela kwiindleko ezongeziweyo ekuhambeni kwexesha. Ii-pigment ezingezizo ezisetyenziselwa ukunika umbala zinokuphela ngokuhamba kwexesha. Xa kuthelekiswa nezinye iipavile, ikhonkrithi inexesha elifutshane lobomi, inikezwe ukuba yenziwe ngezixhobo zexabiso eliphantsi.
Izitena zezitena zikwahlelwa phantsi kohlobo olwenziweyo. Yenziwe ngodongwe olubhakwa kwii-kiln ukuze zome. Iza ngobukhulu obufanayo kuba benziwe baba ngumngundo. Ukufakelwa ngobulumko, izitena zokubekwa kwezitena zihlala zibekwe kudaka okanye kwisanti. Iyathandwa kakuhle ngenkangeleko yayo yeklasikhi kunye nomlinganiswa ofudumeleyo.
Eziluncedo: Izitena zeebrick zihlala ixesha elide kakhulu, zomelele kwaye zihlala ixesha elide. Izitena zeebhondi nazo ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nemibala enje ngombala obomvu, omdaka, umbala o-orenji kunye nengwevu. Zingasetwa kwiipateni ezahlukeneyo ezivumela ukuba bhetyebhetye ngakumbi xa kusiziwa kuyilo. Kuba yenziwe ngezinto zendalo, iipavile zezitena lukhetho olunobuhlobo kwaye zinokucocwa ngokulula, ziphinde zisetyenziswe kwaye zihlangulwe.
Bendlela: Izitena zokubhabha izitena kancinci zibuthathaka kwaye zinotyekelo lokuqhekeka okanye ukujija ixesha, yiyo loo nto zifuna ukuphathwa ngononophelo. Bona eminye imifanekiso Uyilo lwepatio yezitena Apha.
Iiporcelain ezenziwe ngeporcelain zenziwe ngokubeka udongwe kubushushu obuphezulu kakhulu, ukuvelisa indawo eqinileyo, eqinileyo engenasiphelo. Iipavcela zeporcelain zihlala zisetyenziswa kwizicelo zangaphandle ezihlala zimanzi, njengeephuli, kuba azifuneki kangako xa kuthelekiswa nezinye izinto ezinokubakho.
Iipavcela zeporcelain ziveliswa ngobukhulu obahlukeneyo kwaye ziza kuyilo olwahlukileyo oluhlala lilinganisa ukubonakala kwezinto zendalo ezinje ngomthi kunye nelitye.
Eziluncedo: Njengoko sele kukhankanyiwe, iipavile zeporcelain zifunxa ukufuma okuncinci, oko ke kuthintela ukungunda kunye neebhaktheriya. Badinga ukugcinwa okuncinci kwaye kulula kakhulu ukuba bacoceke. Ngaphandle kwezi, iipavcela zepercelain nazo zibonakala zibonakala kwaye ziza kwiipatheni ezahlukeneyo kunye nemibala. Xa kuziwa kwixabiso, iipavile zeporcelain zibiza kancinci xa kuthelekiswa nezo zenziwe ngezinto zendalo ezinje ngegranite, iimabhile, ibluestone, njl.
Bendlela: Iipavorcela zeporcelain azibambeki kakuhle kwiqabaka nakubushushu obugqithisileyo, obenza izinto ezingaphantsi ezifanelekileyo ngaphandle kwamakhaya akwiindawo eziphakamileyo kakhulu.
Iiparbber zerabha zihlala zenziwe kumavili aphindaphindiweyo kwaye zibonelela ngendlela ebalaseleyo yokwenza into endala. Olu lukhetho olugqibeleleyo ukuba ufuna ukunika ipatio yakho okanye indlela yokuhamba inemvakalelo eyahlukileyo.
Eziluncedo: Iipavili zerabha azishukumi ngokupheleleyo, ziyanyangeka ziinyembezi kwaye zifuna ulondolozo oluncinci. Xa kuthelekiswa nokubekwa ngamatye, iipavile zerabha ziyothusa kakhulu kwaye azifane zichaphazeleke. Olu khetho alukho kuphela kwi-eco friendly kodwa kwaye alubizi kakhulu.
Bendlela: Iiparitha zerabha zifuna isiseko esomeleleyo. Nokuba beza ngemibala eyahlukeneyo, ukugqitywa kwayo akunamtsalane njengezinye iipavile. Kuba ikwinto entsha kwintengiso, ubomi bayo uqobo abuvavanywanga ngokupheleleyo, ngokungafaniyo namatye e-cobblestone okanye i-travertine pavers ebikhe yajikeleza amashumi eminyaka.
Iiplastiki zeplastiki ziza kwiindidi ezimbini ezahlukeneyo: ezisanda kwenziwa kunye nokuphinda zenziwe kwakhona. Iipavili zeplastikhi ezenziwe ngokutsha zenziwa ngenkcitho yeplastiki kwaye zenza inkqubo yokuvelisa izinto ezintsha. Iqala ngokunyibilika iplastiki ngamanzi ukuvelisa imveliso engamanzi. Oku kudityaniswa nomhlaba, kuvuselelwe kwaye kugalelwe ekubunjweni okumilisiweyo kwaye komiswe.
Eziluncedo: Ukuphinda usebenzise iipakethe zeplastiki zi-eco friendly kwaye zinceda ukunciphisa inkunkuma. Iza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezitayile kunye nolondolozo olusezantsi xa kuthelekiswa nezinye iipavile.
Bendlela: Iipavile zeplastiki azomelele kancinci xa kuthelekiswa nelitye lendalo, ikhonkrithi, i-asphalt kunye negrabile.
Iipavili ziza kwiindidi ezahlukahlukeneyo zemibala kubandakanya:
UkuKhanya okuKhanyayo okanye iGrey emnyama
Izitena zokubhaya ngezitena ziyaqhubeka ukuba zezona zithandwa kakhulu kunye nakwimfuno yemathiriyeli ekwakheni iipatiyo.
Ngaphandle kobushushu bayo kunye nesibheno esiqhelekileyo, uninzi lwabanini bamakhaya lukhetha ukubeka iipali zezitena ngaphezulu kwezinye izinto kuba zomelele kakhulu, zithembekile kwaye zilondolozo oluphantsi. Kwakhona kulula ukuyifaka kuba iza ngobukhulu obuqhelekileyo kunye nemilo eqhelekileyo. Oku kufana kwenza ukuba kube lula ukubeka kunye nokudibana kunye.
Kuba olu hlobo lweepavers luyimbumba yoxande, zininzi iipateni ezinokuphononongwa ngezimvo zepatio yezitena- ukusuka kwibhondi elula yokubaleka kuyilo oluntsonkothileyo njengebhaskiti yokuluka kunye neherringbone. Izitena zebrick nazo ziza kuluhlu olubanzi lwemibala enokusetyenziselwa ukwenza uyilo olwahlukileyo kunye noludlamkileyo lwepatio.
Izitena zeebrick ziza kwiindidi ezahlukeneyo, kodwa ukhetho olunamandla kunabo bonke abaninikhaya sisitena sodongwe. Izitena zodongwe zinamandla okulinganisa malunga ne-12,000 yeepawundi nge-intshi yesikwere (PSI).
Ngokomndilili, ukwakha ipatio yesitena iya kuhamba ixabise i $ 3,400, enoluhlu oluqhelekileyo lwama- $ 2,400 ukuya kuma-7,000 eedola
Olunye uncedo lokusebenzisa iipavile kwiipatios kukuba ukufakelwa kwayo akusoloko kufuna ukuba kwenziwe yingcali. Nokuba awunamava kancinci xa kufikwa kufakelo lwepavile, uyilo lwepatio kunye nolwakhiwo, unokwenza ngokulula i-DIY ipatio yokuhamba usebenzisa iindlela ezahlukeneyo. I-DIY inokunceda ukunciphisa iindleko zomsebenzi kunye nokugcina imali.
Zininzi iindlela onokuzama ngazo ukuba ukhetha ukuhamba ngePatio yePatio ye-DIY. Okokuqala, ukusebenzisa Iikiti zokubeka iipatio , ebaluleke kakhulu kuyo yonke ikiti enye ye-DIY equlathe yonke into oyifunayo ekwakheni ipatio yokuhambahamba - ukusuka kwiziphawuli ukuya kokulula ukusebenzisa iincwadana zokwakha. Iikiti ziyaziwa kuba zisebenziseka lula kwaye zingenziwa ngokulula.
Olunye ukhetho lwe-DIY kukusebenzisa yokubumba paver. Kule ndlela, ulungiselela ukuthenga iipavita zizonke, kodwa endaweni yoko isamente iyasetyenziswa. Ikhonkrithi ithululelwa ngokuthe ngqo ngaphezulu kwesikhunta esenziwe ngepateni ukufezekisa ukusebenza kwetshe elifanayo. Ukubumba i-Paver kubiza i- $ 15 ukuya kwi-100 yeedola inye, kuxhomekeke kubungakanani. Ziza ngeendlela ezahlukeneyo, uyilo kunye nobukhulu kwaye ziyafumaneka ngokubanzi kwiivenkile zokuphucula ikhaya.
I-DIY ikwalithuba elifanelekileyo lokuyila uyilo lwakho lwepavido. Ngaphandle kokhetho oluchazwe apha ngasentla, nawe unakho ukuphindaphinda izinto ezindala kwaye uzisebenzise njengeepheyile. Amavili erabha asetyenzisiweyo, iimbiza zodongwe ezaphukileyo, izitena ezindala kunye nezinye izinto ezinokuphinda zisetyenziswe zinokulunga ngokudibeneyo ukwenza ipatio esemgangathweni okanye indlela yokuhamba.
Iindleko zokwakha ipatio iyahluka kuhlobo ngalunye lweprojekthi. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga nexabiso lokwakha ipatiyo.
Xa uyila ipatio, unokukhetha kwiindidi ezahlukeneyo zeepavili onokuthi uzisebenzise njengesixhobo somgangatho. Iindleko zeprojekthi zizonke ziya kuxhomekeka kakhulu kwizinto ezininzi, olunye lube luhlobo lwezixhobo ezisetyenzisiweyo. Uhlobo ngalunye lwepeyinti luya kuhambelana nexabiso elithile okanye indleko ngeenyawo zenyawo nganye, kodwa ngokomndilili, i Iindleko zenyawo nganye yesikwere sepatio zinokubakho naphi na ukusuka kwi- $ 8 ukuya kwi- $ 50, ngaphandle kwabasebenzi kunye nofakelo.
Iipeyinti zodwa zinokubiza phakathi $ 1 kunye ne- $ 15 ngeenyawo zenyawo, uninzi lwabanini makhaya bachitha umndilili oqhelekileyo weedola ezi-2 ukuya kwezi-4 ngonyawo wesikwere, kuxhomekeke kwinto leyo, ubungakanani, isitayile kunye nokuthungwa. Kukho ukhetho oluninzi onokuluzama ngezinto zokuxhoma, nganye ineempawu zayo ezintle. Nokuba uhlahlo-lwabiwo mali lwakho luwela kwinqanaba eliphantsi, eliphakathi okanye eliphakamileyo, unokuqiniseka ukuba ufumana izinto ezifanelekileyo ukuze zilungele.
Apha ngezantsi luluhlu lweendleko zokubambisa ngonyawo wesikwere ngohlobo lwento. Qaphela ukuba amaxabiso aboniswe ngezantsi enzelwe izinto kuphela. Ezabasebenzi, ufakelo, izixhobo kunye nezinye iifizi azifakwanga.
Isitena:Iindleko naphi na ukusuka kwi- $ 8 ukuya kwi-25 yeenyawo zenyawo nganye ukuthenga nokufaka. Kwizitena zodwa, ipallet, enokugubungela i-56 yeenyawo zenyawo ixabisa malunga ne-300 ukuya kwi-700 yeedola.
Izitena zodongwe:Iindleko naphi na ukusuka kwi-1.40 ukuya kwi-20 yeedola ngeenyawo
Izikhonkwane zekhonkrithi: Iindleko ezijikeleze i- $ 1.25 ukuya kwi-18 yeenyawo zenyawo nganye.
ILitye leNdalo: Iindleko naphina ukusuka kwi- $ 0.50 ukuya kwi-14 yeedola ngeenyawo.
IsilayidiIindleko naphi na ukusuka kwi- $ 3.60 ukuya kwi-50 yeenyawo zenyawo nganye.
NgumatyeIindleko naphi na ukusuka kwi-3 ukuya kwi-15 yeedola ngeenyawo.
Umkhondo:Iindleko naphi na ukusuka kwi-0.50 ukuya kwi-12 yeedola ngeenyawo.
Udongwe:Iindleko naphi na ukusuka kwi- $ 1 ukuya kwi-18 yeenyawo zenyawo nganye.
Irabha:Iindleko naphi na ukusuka kwi- $ 1.70 ukuya kwi-10 yeedola ngeenyawo.
Iplastiki:Iindleko naphi na ukusuka kwi- $ 2 ukuya kwi-8 yeenyawo zenyawo nganye.
Xa ulungiselela uhlahlo-lwabiwo mali lwakho lwezixhobo ezifunekayo kwimibono yepatio yakho, qiniseka ukuba unika ingxowa-mali yemeko engxamisekileyo ye-10% ngaphezulu kwenani lepaver. Oku kuphendulela iipavile eziza kunqunyulwa, zichithwe okanye zaphulwe ngexesha lenkqubo yofakelo. Kwiipateni ezintsonkothileyo ezineeengile, ukongezwa okungaphezulu ngama-20% kuyafuneka kuba kuya kubakho ukusika kunye nokumosha.
Njengoko besesitshilo, uhlobo lwezinto zokuhombisa ozikhethayo kunye nobungakanani bepatio yakho zezona zinto ziphambili zichonga ixabiso lepatio yokuhamba. Kuxhomekeka kwezi, iifayile ze I-avareji yeendleko zepatio yokuhamba zinokuhla ukusuka kwi-800 ukuya kwi-4,000 zamawaka kubandakanya izinto, abasebenzi kunye nofakelo.
Yimalini iXabiso lePatio yePatio eyi-12 × 12? Ngokomndilili , I-paver patio yeendleko ezili-144 zeenyawo ezili-12 (12 × 12 iinyawo) zibiza i- $ 1,150 ukuya kwii-3,600 zamawaka, kuquka izinto, umsebenzi kunye nokufakela.
Ixabisa malini iXabiso lePatio yexabiso elingama-20 × 20? Ngokomndilili , I-paver patio ebiza i-400 yeenyawo zenyawo (20 × 20 iinyawo) ixabisa malunga ne- $ 3,200 ukuya kwi-10,000 yeedola kubandakanya izinto, umsebenzi kunye nofakelo.Kwi-20 × 20 yeenyawo izitena zepatio, lindela ukuhlawula naphi na phakathi kwe- $ 3,800 ukuya kwi- $ 6,800.
Umndilili wepaliyodi yezitena yokulinganisa iindleko eziqhelekileyo naphi na $ 2,000 ukuya kwii-8,000 zamaRandi . Ixabiso elichanekileyo lihluka kakhulu kubungakanani bepati kunye nohlobo lwezitena ezisetyenzisiweyo. Iipatios ezinkulu okanye ezo zinokuyilwa okunzima ngakumbi zinokuya kufikelela kwi-10, 000 yeedola kuba zifuna umsebenzi owongezelelweyo wokulungiselela.
Izitena zokubhabha zitya ngokubanzi $ 0.25 - $ 4 ngesitena okanye $ 4 kunye $ 8 ngonyawo wesikwere. Izitena zokugqibela eziphezulu ezinemibala enqabileyo kunye neemilo ezingaqhelekanga ziwela phantsi kwebakaki exabiso liphezulu, ejikeleze i-25 ukuya kwi-50 yeedola ngonyawo wesikwere. (Qaphela ukuba la maxabiso enzelwe isitena sodwa. Kusafuneka ulungiselele uhlahlo-lwabiwo mali olongezelelweyo lofakelo, umsebenzi kunye nezinye izinto ezinje ngesamente, isanti kunye nezixhobo eziza kusetyenziswa.)
Uhlobo, umbala, ubungakanani, ukugqiba kunye nenkqubo yokwenziwa kwezitena zezinye izinto ezichaphazela iindleko zizonke zepatio yezitena. Nantsi inkangeleko ethe kratya kwi Ixabiso kwisiqwenga seentlobo ezahlukeneyo zezitena :
Izitena ezibomvu: Iindleko ezijikeleze i-0.25 ukuya kwi-4 yeedola kwisitena ngasinye
Izitena zekhonkrithi ezingwevu: Iindleko ezijikeleze i- $ 0.50 ukuya kwi-3 yeedola kwisitena ngasinye
Izitena eziMatshini eziBunjiweyo- Iindleko ezijikeleze i- $ 0.40 ukuya kwi- $ 0.90 ngezitena nganye okanye kwi-1.75 yeedola ukuya kwi-4 yeenyawo zenyawo nganye
Izitena ezenziwe ngesandla - Iindleko ezijikeleze i- $ 0.80 ukuya kwi- $ 3per yezitena okanye i-3.75 yeedola ukuya kwi-13.25 yeedola ngenyawo lesikwere
Izitena ezandisiweyo - Iindleko ezijikeleze i- $ 0.35 ukuya kwi-1.50 yezitena kwisitena okanye i-1.60 yeedola ukuya kwi-6.50 yeedola ngeenyawo
Izitena ezincinci - Iindleko ezijikeleze i- $ 0.35 ukuya kwi- $ 2per okanye i- $ 1.65 ukuya kwi-9 yeedola ngeenyawo
Izitena ezivumayo- Iindleko ezijikeleze i- $ 0.50 ukuya kwi-1.60 yeedola kwisiqwenga ngasinye okanye kwi-2.50 yeedola ukuya kwi-7 yeedola [ngonyawo wesikwere
Ipatio yokubeka izitena eyomileyo eyomileyo: Izitena ezibekiweyo ezomileyo zibanjiwe kunye nesanti eyomileyo kwaye oku kubiza malunga ne- $ 4 ukuya kwi-8 yeedola ngenyawo lesikwere kwizinto.
I-patio yokubeka izitena emanzi: Olu hlobo lwepatio yokuhamba lusebenzisa isamente okanye udaka ukuseta ngokusisigxina izitena kunye kwaye oku kubiza malunga ne- $ 6 ukuya kwi-12 yeedola ngenyawo lesikwere kwizinto.
Iipavers zibiza ixabiso ngeenxa zonke $ 10 ukuya kwi-17 yeenyawo zenyawo nganye ukufaka , Kuxhomekeke kubukhulu, izinto kunye nabasebenzi.
Inkqubo ye- Iindleko zabasebenzi ukufaka ipatio yevaranda kuqhelekile $ 50- $ 80 ngeyure okanye $ 4- $ 11 ngonyawo wesikwere. Ixabiso labasebenzi liya kwahluka ngokuxhomekeka kwindawo okuyo, kodwa kuxhomekeke nakwezinye izinto ezinje ngokuntsonkotha kweprojekthi kunye nobubanzi bomsebenzi.
Xa uyila ipatio entsha, kukho uninzi lwezinto onokukhetha kuzo onokuzama ukubeka iipavita. Ipateni iya kuxhomekeka kakhulu kubume beepheyinti ozisebenzisayo, isitayile ofuna ukusiphumeza kunye nobungakanani bendawo.
Apha ngezantsi kukho imizekelo yeendlela eziqhelekileyo zesintu kunye neepateni zokubeka ipavile. Qaphela ukuba ungasebenzisa ipateni enye okanye udibanise kwaye utshatise iindlela ezahlukeneyo ezimbini okanye ezintathu, iimilo ezahlukeneyo kunye neepateni ukwenza uyilo olunomdla ngakumbi lweepatio.
Ibhondi ebalekayo yeyona ndlela ilula kwaye icace gca yokuhamba phakathi kwazo zonke iintlobo. Luhlobo lwepateni apho iipavile zibekwe khona kwimiqolo ebaleka kwicala elinye.
Umzekelo webhondi osebenzayo ngowona mzekelo uqhelekileyo osetyenziswa ngabanini bamakhaya. Yeyona ilula ukuyifaka kunye neyona ndlela ilula yokuyibeka. Ipateni yokubaleka esebenzayo nayo ifuna ukusikwa okuncinci, okuthi ekubuyiseni kuguqulele kwinani elincinci lenkunkuma xa kuthelekiswa nezinye iipateni zokuhambisa. Ayisiyiyo kuphela ukuba kukho isixa esincinci somsebenzi, ixesha kunye nomzamo kodwa kunye nexabiso eliphantsi lofakelo.
Nangona uthathwa njengeklasikhi, ungayihlaziya inkangeleko yebhondi ebalekayo usebenzisa indibaniselwano yemibala yokuyila, imikhombandlela eyahlukileyo kunye nokusetyenziswa kwemida. Ubophelelo lokubaleka luphelele kwimimandla encinci kuba inokudala ukukhohlisa kwendawo enkulu. Kuba iipavile zibekwe ecaleni, kugxininiswa kwimigca enokwenza ipatio ibonakale ibanzi okanye inde, kuxhomekeke kwicala elibekiweyo. Ikwayiloo pateni ingcono oyisebenzisayo ukuba ufuna ukutsala umdla kuyilo lwasekhaya.
Umzekelo weherringbone uqhele ukusetyenziselwa iipaneli ezixande. Zibekwe ngendlela eyahlukileyo zenze ipateni ye-zig-zag okanye imilo ye-V. Iphethini yeherringbone inokufakwa kwi-45 okanye kwi-90 degrees kwaye ijongeke ngcono xa kusetyenziswa umda macala onke.
Iphethini yeherringbone yaziwa kakhulu ngokuzinza kwayo okunamandla kunye namandla. Iyakwazi ukumelana nokusetyenziswa okunzima kwaye ilunge kakhulu kwiindawo ezinezithuthi ezininzi njengeendlela, iindlela zokuhamba, iindlela kunye neepatio.
Umbono wesipho sesikhumbuzo sesibini
Iphethini yeherringbone idala isiphumo esibonakalayo esomeleleyo esisetyenziselwa indawo eziphakathi ukuya kwezinkulu. Ukwenza uyilo lube nomdla ngakumbi, abaninimzi bahlala bexubeka kunye neephuli zomdongwe phakathi. Ngamanye amaxesha, umda ochaseneyo uyongezwa ukwenza umbala wayo uphume.
Ipateni yokuluka ibhaskiti yavela kwimbali yoyilo lwesiNgesi sakudala kwaye yaziwa kakhulu ngokuqaqamba kwayo kweediliya. Njengomzekelo wesherringbone, ipateni yokuluka ibhaskiti ikwasebenzisa iipavile zangxande, njengezitena, ukwenza uyilo lweebhloko.
Igama layo, ibhaskiti yokuluka, ibhekisa kwindlela abafana ngayo ngqo nendlela yokuluka esetyenziswa ngabaluki xa besenza iibhaskithi zokwenyani. Iiparethi ezixandekileyo ziyatshintsha phakathi kwezibini ezime nkqo nezithe tye. Iipavile kubonakala ngathi ziyanyamalala phantsi kolunye umqolo wezitena abadibana nazo ngokungagungqiyo kwaye baphinde babonakale kwelinye icala.
Umahluko odumileyo wale patheni yile ibhaskiti yokuluka kabini ethi isebenzise izibini zokuxhonywa koxande. Iibini zemigca yoxande okanye izitena zibekwe kumacala ahlukeneyo atshintsha kumqolo ngamnye okanye kwikholam nganye. Umzekelo, i-TOP: izitena ezimbini ezimileyo ezimileyo kunye nezitena ezimbini ezijikelezayo, BOTTOM: ezimbini ezisebenza ngezitena ezixwesileyo kunye nezitena ezimileyo ezibini.
Ngaphandle kwebhokisi yebhasikiti kunye ne-basket ephothiweyo ephindwe kabini, kukho ezinye iimeko ezinzima ngakumbi ezibizwa ngokuba yi ibhaskiti enye yokuluka kwaye i ibhokisi yomlobi webhokisi .
Nangona ngokwesiko ngesitayile, zininzi iindlela onokuthi uzame ngazo ukuhlaziya inkangeleko yebhaskiti yokuluka ibhaskiti. Ukwenza ubuqaqawuli obunokuhonjiswa ngakumbi, unokutshintsha imibala yeepheyinti kwaye udibanise imibala eyahlukileyo kunye nezincedisayo, endaweni yokubambelela kwithoni enye. Ilungile kubanini bamakhaya abafuna ukudityaniswa kweediliya kunye nokubukeka okwangoku. Olu hlobo lwepateni yokubeka iparele nayo yomelele kakhulu.
Njengoko igama layo libonisa, iphethini setyhula ifezekiswa ngokubeka iipavile kwisekoyingi okanye kubume obujikelezayo. Izithuba ezincinci phakathi kweepheyiji ziya kugcwaliswa ngodaka okanye isanti ukuvala nakuphi na ukusilela.
Umzekelo wesetyhula uxutywe kunye nezinye iipateni zokubeka ezinje ngebhondi esebenzayo, herringbone kunye ne-basket weave. Kukho iindlela ezininzi zokwenza iphethini setyhula kwaye yenze umdla ngakumbi. Ngaphandle kokwenza isangqa esipheleleyo usebenzisa le pateni, unokwenza kuphela isiqingatha okanye ikota yesangqa.
Iphethini setyhula isebenza kakuhle kwizithuba ezijikeleze iigazebos kwaye ijongeka intle xa isetyenziswa kwiindawo ezinkulu ezinje ngeedriveways kunye nepatios. Ihlala isetyenziswa njengendawo ekugxilwe kuyo kwipateni yomgangatho kwaye inokusetyenziswa ukuba ufuna ukujonga ngqo okanye ukucacisa kwaye uqhekeze indawo enkulu engaphandle.
Ipatheni yabalandeli baseYurophu yathandwa eYurophu, apho inokubonakala khona ngokubanzi hayi kuphela kuseto lokuhlala kodwa nakwiyilo lorhwebo. Ikwabizwa ngokuba yipateni yaseBelgium okanye ipateni yeFlorentine, oku kufezekiswa ngokubeka iipavile kuthotho lwee-arcs kwaye uziphinda-phinda amaxesha ambalwa ukufezekisa isiphumo somntu oyifunayo. Ngokungafaniyo nezinye iipateni zokuhombisa, i-European Fan Pattern isebenza kuphela ngeepeyinti ezimilise ityhubhu.
Kunye nepateni yesetyhula, ipateni yomlandeli waseYurophu yaziwa njengeyona ngxaki inzima ukuyibeka. Kunzima kakhulu ukuqala kwaye kunzima kakhulu ukuseta, kodwa wakugqiba, ikwangoyena mhle kwaye uyathandeka kubo bonke. Inomdla kubuhle sesona sizathu siphambili sokuba ibe yinto enkulu kangaka eYurophu.
Le patheni isebenza kuphela kuseto olukhulu kwaye ilunge kakhulu kwiidriveways okanye iipatio ezibanzi. Ipateni yomlandeli waseYurophu ikunika ukuguquguquka ngokwendlela yoyilo kuba unokuzama ubungakanani befeni kunye nemibala yeepavali. Ungayidibanisa nezinye iipateni, njengephatheni yesetyhula, ukwenza indawo ekugxilwe kuyo kwindawo.
Ukuze ufumane indlela elula yokufezekisa le pateni, enye indlela esinokuyicebisa ngayo kukusebenzisa iipaver fan zekiti onokuzithenga kubavelisi bepavile.
Ipatheni yesixokelelwano sokubopha ngomnye umzekelo wendlela elula kwaye elula yokufezekisa indlela yokubekwa kwepavile. Yenziwe ngokubeka ii-pavers ecaleni kwelinye kunye nawo onke amalungu ngokudibeneyo ukwenza isiphumo esomeleleyo somgama. Le patheni inokufezekiswa kusetyenziswa iiyunifom kunye nobukhulu obuqhelekileyo boxande okanye isikwere esimiselweyo.
Iziphumo ezibonakalayo ezinamandla kunye nobuhle obuqaqambileyo bomzekelo wokubekwa kwibhondi yokubamba kunokunceda ukudala ukukhohlisa kwendawo, yiyo loo nto isetyenziselwa indawo ezincinci ezinjengeepatio kunye neendlela zokuhamba.
Nangona inobugcisa obuhle kakhulu, ipateni yesixokelelwano sokubopha inexabiso elisezantsi ngokwentelekiso, isenza ukuba ingakulungeli indawo ezihlala zithwala imithwalo enzima njengeendlela zokuhamba. Kodwa ngaphandle kwale ngxaki, iluncedo ngeendlela ezininzi. Kokunye, kufuna ukusikwa kancinci kwaye kungabikho nkcitho-nto leyo eyenza ukuba ingabi bobuhlobo be-eco kuphela kodwa neendleko ezinobubele ngokunjalo.
Xa ufaka ii-pacers zepatheni yesixokelelwano sokubopha, kuyacetyiswa ukuba kufuneka kuthathelwe ingqalelo enkulu ukwenza umgca othe ngqo. Izitena ezifakelweyo kufuneka ziqiniswe kunye. Ngokwesiqhelo, isetyenziswa kunye nomda obekwe kwikhonkrithi ukuqinisekisa ukuba zonke iipavile zihlala zingagungqi ngalo lonke ixesha.
Njengobophelelo be-stacking, ipateni efanayo nayo yenye yeepateni ezilula nezona zilula zokufezekisa. Yenziwe ngokubeka okanye ukuphinda iipheyiji ngendlela yokuba zenze iigridi. Ngokungafaniyo nesixokelelwano sokuqhoboshela, amalungu adibeneyo eepateni kwipateni efanayo yokwakha akenzi njalo. Oku kusebenza kuphela ukuba kusetyenziswa ubungakanani beeparethi kunye nemilo efanayo.
Iphethini efanayo iyenziwa ngomgca wegrout. Ngamanye amaxesha, ingca iyongezwa ukugcwalisa izikhewu eziphakathi kunye nokunika ukubonakala okunomdla ngakumbi. Olu hlobo lwepateni lusetyenziswa kakuhle kwiigadi, imihlaba kunye neendlela zokuhamba.
Iphethini engaqhelekanga ayilandeli ngokwenyani indlela echanekileyo yokubeka iipavile. Ngale nto, unokufumana ubuchule njengoko ufuna kuba iipeyinti zibekwe ngendlela engahleliwe. Oku kufezekiswa ngokusebenzisa amatye endalo angalinganiyo kunye nobukhulu bendalo okanye iizilebhu ukwenza imbonakalo eyahlukileyo. Ngamanye amaxesha kubhekiswa kuyo njengepateni yokuhamba ngobuhle okanye ipateni yokuhamba ngokungacwangciswanga kwaye isetyenziswe kakuhle xa usebenza ngamatye endalo asembiwa okanye asikwe enkwalini.
Kuzo zonke iipateni zokuhamba, ipateni engaqhelekanga yeyona indalo yazo zonke. Inika ukuguquguquka okuphezulu ngokweyilo. Nangona kubonakala kulula ukufezekisa, le patheni isafuna ukucwangciswa okuninzi kwaye inokuthatha ixesha ukugqiba ngempumelelo. Kodwa xa igqityiwe, izisa umphumo onomdla kakhulu kunye nolwahluko omkhulu kwimigca ethe tye kwindawo engaphandle. Le patheni inokusetyenziswa kwiindlela, iipatio kunye neephuli.
Siye saqulunqa ezinye zezona zoyilo zibalaseleyo zeeparao onokuzama ukuzenzela ikhaya lakho. Ingaba indawo yakho yangasemva iyimveli, yangoku okanye i-Tuscan ephefumlelweyo, i-pavers iya kusebenza kakuhle njengendawo yokulungisa umhlaba kunye ne-flooring ngenxa yezinto ezihlukeneyo kunye neentlobo ezahlukeneyo.
Ipateni ediagonal esetyenzisiweyo ekubekeni phantsi iipavile zamatye zale patio egobileyo inceda ukwandisa indawo ngakumbi. Umngxunya wamatye ofanayo, iibhentshi kunye nekhawuntara yasekhitshini igqibezela indawo yokutyela yangaphandle emnandi.
Le patio yelitye yendalo ecocekileyo inikezela ngelitye elihambelanayo Iimpawu zamanzi yongeza indawo yokuphumla kwisithuba.
Iipeyinti zingasetyenziselwa ukwenza iipatio eziphakanyisiweyo. Iipatiyo eziphakanyisiweyo ziphakanyisiwe kancinci kunendawo yonke. Ungafaka iikona, amagophe kunye nepateni eyahlukileyo kuyilo lwepatio yakho. Ngokuxhomekeka kwisitayile sakho osithandayo, ungasebenzisa ilitye elifanayo ukubandakanya amanyathelo okanye izitepsi zoluvo lwakho lweepatio eziphakanyisiweyo.
Ipatio egobileyo apha ngasentla isebenzisa iipeyinti zekhonkrithi ezimdaka ngombala ezithi zihle kamnandi kwingca yengca. Imilo yoyilo lwepatio ephakanyisiweyo ikwahamba kamnandi njengoko ibonisa imilo yequla.
Le patio yepavili inezikwere zeetrafti zesikwere ezibekwe kwipateni yokubopha. Umbala wayo ofudumeleyo omhlophe kunye neetoni ezimdaka ngombala ezikhanyayo ziyawuzalisa umbala wendlu ongqinelanayo.
Izikhonkwane zekhonkrithi ezinobume obahlukeneyo kunye nobukhulu busebenza njengomqolo ongasemva kwindawo entle enamanzi eengxangxasi kule ndawo yangasemva.
I Paver kunye ne mulch yenye yezona zinto zixhaphakileyo ezisetyenziselwa iipatio kunye neeyadi ezingasemva. I-mulch naluphi na uhlobo lwezixhobo ezisetyenziselwa ukugubungela umhlaba. Inokuhluthwa okanye ukukhonkotha i-bark, ukusika ingca, iinaliti zephayini, umququ osikiweyo okanye amagqabi omisiweyo. Isasazekile okanye ibekiwe phezu komhlaba ukunceda ukugcina ukufuma, ukucinezela ukhula kunye nokunceda umhlaba ubonakale umhle ngakumbi.
Le setyhula yokujikeleza idibanisa idibanisa amatye endalo kunye nomda we-mulch. I-organic mulch yesebe inceda ukuthambisa ukujonga kunye nokuthambeka kwepatio, ngelixa ikwabonelela ngokungafaniyo kumbala womhlaba.
Iiprojekti zepatio zala maxesha zimema kakhulu ngokusetyenziswa kweeparaji ezinemibala efudumeleyo kunye nendawo eyoyikisayo yendawo yangaphandle.
Iipeyinti zinokudityaniswa kunye nomda wegrabile. Ayisijongi nje kuphela ukuba inomtsalane, kodwa ziyanceda ekufunxeni amanzi.
Indawo enomxholo wenkqantosi yeli khaya isebenzisa iipoyinti zodongwe ezikwisikwere kwiindawo ezineshushu zeterracotta. Indawo ejikelezileyo igcwele igrabile kunye necacti ukugqibezela umxholo.
Izikhonkwane zekhonkrithi kwipateni yokuluka ibhaskiti zisetyenziselwa le patio isetyhula inomngxunya omncinci womlilo ophathwayo.
Ngaphandle kwesikwere esiqhelekileyo kunye neefom zoxande, ungasebenzisa iipavoda ukwenza uyilo lwepatio egosogoso.
Le patio encinci yekona igqityiwe ngezitena ezibekwe kwipateni yeherringbone. Ithoni efudumeleyo yezitena yahluke kakuhle ngocingo olumhlophe olungqongileyo.
Iipavile zekhonkrithi ezahlukileyo zihombisa le patio egobileyo ebonisa umbono omangalisayo. Ukutshatiswa kweebhentshi zamatye afakelweyo kongezwa kumacala asebenza njengendawo yokuhlala kunye nomda wendawo.
Ipatio enkulu yokubamba ngaphezulu inendawo yomlilo wezitena kunye nomgangatho wamatye endalo. Inikwe isitulo sokungqengqa esilinganayo, indawo yokutyela yangaphandle eyenziwe ngomthi kunye negrill yangaphandle yezitena.
Sebenzisa ingca njengesixhobo sokugcwalisa amalungu awenzi nje kuphela ukwandisa isibheno sobuhle bendlu yakho yangasemva kodwa ikwabonelela ngokuhlaziyeka. Le yenye yeendlela ezona zilungileyo zokunciphisa ukubonakala kwelitye elilukhuni okanye iipavile zekhonkrithi, ngelixa usongeza okwahlukileyo kwisithuba. I-Paver kunye nengca ikwanceda iipatios zidityaniswe ngokuhambelana ngakumbi nomhlaba ojikelezileyo.
Ipatio yale mihla ingentla inempawu ze-zen zisebenzisa i-pergola kunye ne-travertine pavers enemida yengca.
Amatye okukhanya amdaka ngombala amnyama enza ukunyathela kwamatye akhokelela kule patio encinci yesikwere. Indawo ejikelezileyo igcwele igrabile kwaye inengca encinci yengca.
Iipara zingasetyenziselwa ukwenza amanyathelo okanye izinyuko zeepatios eziphakanyisiweyo.
La manyathelo epaver akhokelela kwindawo encinci yokuhlala kunye nomthombo wamanzi.
Amanyathelo amatye amabi anokumiswa ngononophelo ukwenza indlela yokujonga yendalo.
I-pergola yenye yezona zixhobo zibalaseleyo zepati yokuhamba. Inokuba yeyiphi na i-archway, uyilo olwenziweyo okanye i-trellis kunye nathi ngaphandle kwento yophahla. I-pergola yeyona ndawo ifanelekileyo yokubeka indawo yokuhlala yangaphandle kwipatiyo kuba inika umthunzi owoneleyo elangeni.
Ipatio engentla ineplagola enefenitshala yangaphandle ehlanganisiweyo kunye nemiphanda ebuyiselweyo yezithuba. Iipavile ezincinci zekhonkrithi zinabela kwindlela egosogoso ejikelezwe ngamagqabi omileyo.
Le miqadi yepatio ejikelezileyo enomtsalane ofudumeleyo, onomtsalane kunye namatye ayo angwevu angwevu, indawo yokuhombisa ilitye elingaphandle kunye nokuxinana kweenkuni.
Izitena ezibini zesitena zisetyenziselwa le patio inezitena zangaphandle kunye nendawo yokutyela. Ukudibanisa izitena ezinombala ongwevu kunye nomdaka zenza umahluko kunye nobukhulu kwipateni yomgangatho. Ngelixa indawo eluhlaza okwesibhakabhaka embindini izisa ukungacacanga kwindawo.
Ipatio encinci yesikwere ngentla isebenzisa ii-traverine pavers kunye ne-swing yokuphumla ezimbini.
Iiparavers nazo zizinto ezifanelekileyo zokuhambisa iiphuli ngenxa yokuba ziyanyibilika kwaye ziyakwazi ukumelana nokuvezwa kwamanzi kunye nokufuma. Phakathi kwazo zonke izinto ezenziwe ngepavile, izinto ezitywiniweyo zangaphambi kwesamente zezona zinto zilunge kakhulu kwimigangatho yamachibi ngenxa yokuba zomelele, azinakugqithwa kwaye zilingise ukubonakala kwamatye endalo kunye nezitena.
Ukuba unesithuba esilinganiselweyo sasemva kwendlu, ungabeka ibhafu eshushu kwipatio yakho yokuhamba endaweni yephuli.
Ipatio yokuhombisa ikhonkrithi eyakhiwe emngxunyeni womlilo kule ndawo yangasemva isebenza njengendawo efanelekileyo ye-hangout emva kokuqubha emva kwemini.
Uyilo oluhle lokubhukuda lubonisa iikhonkrithi zesitayile esenziwe ngamatye ekhokelela kwipatio egutyungelweyo. Isiqithi samachibi esixhonyiweyo esinemithi yesundu emibini senza indawo enomdla. Ukulungiswa komhlaba okuluhlaza okwetropiki, iimpawu zamanzi kunye neshelufu lokuhlala elangeni zizinto nje ezimbalwa zokuma koyilo lwasemva kwendlu.
Uyilo oluhle lwedama lokuqubha lisebenzisa amatye epeyinti njengendlela yokuhamba ejikeleze umjikelo okhokelela kwibhafu eshushu. Igceke ngokwalo linomhlaba owenziwe ngegrabile kunye nepatio egutyungelweyo enezixhaso zamatye.
Ipuli yokuqubha enodongwe eyakhiwe ngepatio kunye nebhafu eshushu yamatye.
Ngaphandle kwepergola, ipavili lolunye uhlobo lwesakhiwo esingaphandle onokuthi usibeke kwipatio yokubamba ukuba ufuna indawo yokuhlala engaphandle.
Izimvo zepativer zePaver zingenza konke kwindawo yokubuyela umva emva kwendlu ngokubandakanya indawo yokuhlala kunye neendawo zokuzonwabisa kunye nokuhlala ngaphandle. Olu luyilo lwenziwe lwagqitywa ngetende, enye ifanitshala yangaphandle yokuhlala kunye nokwakhiwa kwindawo yomlilo wamatye.
Le patio yamatye inokubamba iqela labathandathu kunye nenkundla enkulu yokhuni enomngxunya wamatye.
Eli khaya lasekhaya lihlaziyileyo libonisa ipatio yamatye yendalo enengxangxasi yamanzi kunye nekhabana. Sebenzisa ilitye elifanayo kwipatio, inqaku lamanzi, ukutyibilika, iindonga kunye neziseko zeposi yepali kunceda ukudala ukujikeleza nokuhlangana ngakumbi kwendawo.
Nokuba iipatios ezincinci zinokujongeka zintle ngoncedo lweepheyinti. Iipali ezinkulu zezona zinto zilungileyo zokusebenzisa iipatio ezincinci kuba zinceda ukwenza indawo yokucinga, okwenza ipatio ibonakale inkulu. Ukubeka iipheyinti kwipateni ediagonal kuya kunceda ukwandisa indawo. Elinye iqhinga lokuyila kukusebenzisa imibala emincinci enombala njenge beige, imibala emhlophe engwevu kunye neepaneli zetan ukunika ipatio imvakalelo eqaqambileyo.
Olu luhlu lweparao encinci lubonelela nje ngesixa esifanelekileyo segumbi lokuphumla kwizitulo zokuphumla ukonwabela ukubuyela umva kwendlu yetropiki. Ukugcinwa okuphantsi Uyilo lwegrabile yegrabile ukudityaniswa neepheyinti kunokuba yindlela engabizi kakhulu yokufumana uyilo olunomtsalane.
Indawo yokuhamba ngamatye ikhokelela kwipatio encinci ejikelezileyo kule ndlu inhle. Iipavili zepatio zibekwe kwipateni ejikelezayo ngelixa indlela yokudibanisa idibanisa umxube wokuxuba kunye negrabile.
Ipatio encinci yasemva kwendlu inepateni yeherringbone enefenitshala yangaphandle eyenziweyo. Iingcamango ezininzi zepatio zisebenzisa iphethini ye-herringbone kuba isebenza ngokulinganayo kwisithethe, uyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje.
Iipavile zinokutshintsha kwangoko indawo yangasemva ngokuyinika umdla obonakalayo. Njengomfanekiso ongentla, iipavile zekhonkrithi zinika ubomi kwindawo ejikelezileyo.
Eli khaya lesitayile laseSpain lenza ipatio yezitena yodongwe egcwalisa ithoni efudumeleyo yeethayile zophahla lweterracotta. Kwiziko ubona umthombo omncinci ogqityiweyo ngokudibanisa iithayile kunye nezitena.
Enye indlela yokuphakamisa umsebenzi kunye namava emibono yakho yepatio kukubandakanya umngxuma womlilo kuyilo lwayo. Kulabo bakonwabela ukuchitha ixesha ngasemva kwezindlu zabo, umngxuma womlilo awuboneleli ngemfudumalo kuphela ngamaxesha obandayo kodwa yindawo efanelekileyo yokuphumla, ukutya kunye nosapho okanye ukonwabisa izihlobo.
Ukwakha ipatio enemiqadi yomlilo kunokwenziwa ngeendlela ezininzi. Enye kukumba umngxuma apho kuya kuphumla khona umlilo-ngale ndlela ke umngxuma womlilo uphumle ngaphakathi kumgangatho wepati. Enye indlela kukuyakha ngokuthe ngqo kumphezulu wepatio emva kokuba zonke iipavile zibekiwe - -ngolu hlobo, umgodi womlilo uphakanyiswe ngaphezulu komgangatho womhlaba. Ngaphandle komngxuma womlilo, ungongeza ezinye izihlalo ukugqibezela ukujonga ipatio yakho.
Ezona zinto zixhaphakileyo xa kusenziwa indawo yokubasa umlilo zizitena, kodwa namanye amatye endalo aya kusebenza kakuhle.
Ipatio engasentla iyasetyenziswa ikhonkrithi enestampu iipeyinti kunye nomgodi womlilo wezitena.
izipho zomtshato enkosi amanqaku
Umbala oxinzelelekileyo kunye nombala ofudumeleyo wale patio inendawo eyakhelwe emngxunyeni womlilo ithelekisa kakuhle nengca ejikelezileyo lwn kunye nocingo lwabucala olumhlophe.
Yakhelwe ekuhlaleni isihlalo sesinye sezibonelelo ezilungileyo onokuthi uzonwabele ngemibono yepavido. Ungasebenzisa ilitye elifanayo oye walisebenzisa kumgangatho wepatio kodwa ukuba ufuna ukufumana ubuchule obuninzi unokuxuba izinto ezahlukeneyo, iimilo, ubungakanani kunye neepateni. Umzekelo, ipatio yokuhombisa enobunewunewu, umzekelo, inesitayile somlilo samatye esinezitena ezihambelana nomgangatho. ilitye elifanayo lisetyenziselwa izihlalo zodonga, ukudala ukuziva okuhlangeneyo kwisithuba.
Le yadi enkulu inezinto ezininzi ezenziwe ngokudibanisa iipavili zamatye, igrabile kunye nelitye lokuhombisa.
Iingcamango ezinkulu zepatio ezinje ngalo mzekelo zinokusebenzisa imingxunya yomlilo emininzi ukwenza umdla obonakalayo kunye nokufudumala ebusuku. Le patio igqunyiweyo ibonelela ngendawo eninzi yokonwabisa kweli khaya linqabileyo.
Le patio yakhiwe ngezitena zekonkrithi ezibekwe kwipateni yokuluka ibhaskithi, ngelixa eyakhelwe kumngxunya womlilo oyisetyhula ecaleni usebenzisa iphethini yokubaleka elula.
Ngaphandle kweziphawuli, ikhonkrithi lolunye ukhetho lwezinto ezinokusetyenziselwa iipatios. Eyaziwa ngokuba yenye yezona zinto zomeleleyo zokwakha, ikhonkrithi ineempawu ezininzi ezomeleleyo ezenza ukuba ibe yenye indlela efanelekileyo yokuhamba.
Uninzi lwabanini bamakhaya luyazibuza ukuba yeyiphi eyona ibalaseleyo kwezi zimbini. Apha ngezantsi sikunika uthelekiso olubanzi lwekhonkrithi kunye neepavali ezisekwe kwizinto ezahlukeneyo:
Ukuzinza. I-slab yekhonkrithi ihlala ixesha elide kakhulu kwaye inokhetho olomeleleyo nolomeleleyo. Iza nenqanaba lamandla le-9,000 ye-PSI. Iipeyinti zihlala zomelele kwaye amandla azo axhomekeke kuhlobo lwezixhobo ezisetyenzisiweyo. Ngokubanzi, iipheyiji zinamandla aphindwe kane kunesilayidi esiqhelekileyo sekhonkrithi, oko kuthetha ukuba banokusingatha amaxesha amane ubunzima besisindo ngaphambi kokuba siphule okanye sisilele.
Nangona iqinile, ii-slabs zekhonkrithi zihlala zithambekele ekuqhekekeni nasekuqhekekeni. Ezinye izinto ezinokubangela oku kukutshintsha komhlaba kunye nokutshintsha kobushushu rhoqo. Iziphawuli, kwelinye icala, azithandi ukuqhekeka, kodwa zinokukhululeka ekuhambeni kwexesha kwaye zibangele ingozi.
Umsebenzi wobomi. Ikhonkrithi inokuhlala iminyaka emininzi, kodwa ezinye izinto zepeyinti ziyaziwa ukuba azihlali nje kuphela kumashumi eminyaka kodwa nakwiinkulungwane. Thatha i-cobblestones, umzekelo, ezazisetyenziswa eYurophu kumakhulu eminyaka eyadlulayo, kude kube namhla, iindlela ezenziwe ngezi zinto zisekhona kwaye ziyasebenza.
Ubuhle. Zombini ikhonkrithi kunye neepavumente zinomtsalane wazo wobuhle. I-slab yekhonkrithi ineentlobo ezibanzi zeepateni, ubukhulu kunye neemilo, kodwa umbala wazo unqunyelwe .. Ukubhabha kwelinye icala, kuza nezinto ezahlukeneyo kwaye nganye iza ngeendlela ezahlukeneyo, izitayile kunye nobukhulu. Banikezela ngendlela eyahlukileyo yokutyikitywa kwezitena, umzekelo, zeklasikhi, ngelixa ilitye lobuciko linomtsalane wehlabathi elidala.
Phakathi kwepavment kunye nekhonkrithi, kufuneka sitsho ukuba eyangaphambili ifanelwe yindawo ephezulu xa kuziwa kubuhle, ngakumbi ukuba usebenza ngamatye endalo. Iipavile zibonakala ngakumbi kwaye zibonelela ngakumbi ngokuguquguquka koyilo.
Ukufakwa. Ipeyinti zithathwa njengezinzima ukufaka ngenxa yokuba zibekwe ngesandla ngokwahlukeneyo. ngokungafaniyo nesilayidi sekhonkrithi, esisiseko sayo kubandakanya ukugalela, ukomisa nokuphilisa isamente kangangeentsuku ezimbalwa. Ngokususwa kwepheyiji kunenkcazo ethe kratya kwaye kufuna ukucwangciswa okufanelekileyo-ukubeka iipavile luhlobo lokufana nokwenza iziqwenga zepuzzle zilingane. Nje ukuba zibekwe, isanti okanye olunye uhlobo lwezixhobo ziya kusetyenziswa ukudibanisa iziqwenga kunye. Ngekhonkrithi, amanyathelo alula ngakumbi kwaye nje ukuba i-slab yomile, ilungele ukusetyenziswa.
Ukugcinwa nokulungiswa. Zombini ezi zinto kulula ngokucoceka ukuzicoca, kodwa kuthatha ixesha elincinci kunye nomzamo wokucoca i-slab yekhonkrithi kuba lilitye elipheleleyo, ngokungafaniyo neziqwengana eziziziqwenga zomntu ngamnye. Ukucoca iipavita nokucoca ikhonkrithi kufana kakhulu, njengoko zombini zinokwenziwa kusetyenziswa umtshayelo werabha erhabaxa, ibrashi yokukhuhla, iarhente yokucoca kunye nethumbu. Ukucoca rhoqo ngokutshayela kunye nokuhlamba ngamanzi kwanele ukugcina ipatio ingenalo uthuli kunye nokungcola. Ukucocwa okunzulu kunokwenziwa minyaka le okanye kabini ngonyaka kusetyenziswa ishawuli yoxinzelelo.
Ulondolozo lwexesha elide lwee-slabs zekhonkrithi kubandakanya ukuthengiswa kwakhona rhoqo emva kweminyaka emibini ukunceda ukukhusela ngokuchasene namabala. Kwiziphambuka, ngakumbi ezo zinemigca ye-grout, unokufuna ukususa ukukhula kokhula phakathi kwezikhewu zamatye amaxesha ngamaxesha.
Ikhonkrithi ithathwa njengokulula ukuyigcina, kodwa ixesha elongezelelekileyo, linokuqhekeka kunye nebala. Ekuphela kwendlela yokuyilungisa, kukuphinda ubhale islab yonke. Iziphawuli, kwelinye icala, kulula kakhulu ukuzilungisa njengoko naziphi na iintanda zilungiseka ngokulula ngokufaka endaweni yepavile eyaphukileyo.
Ukhuseleko. Amakhonkrithi ekhonkrithi athambekele ekubeni atyibilike xa emanzi, ngakumbi ukuba abotshwe ngetywina elikhuselayo. Uninzi lwezinto zokubamba (ngaphandle kwezinto ezibambekayo zekonkrithi), azinangxaki xa kufikwa ekutyibilikeni. Ngeeparavers, unokunceda ukuphucula ukubamba kwabo ngokukhetha iziqwenga eziphakamise imiphetho.
Ixabiso lePavers vs Concrete. Xa kuziwa kwiindleko, i-slab yekhonkrithi ifikeleleka ngakumbi kwaye iyabiza kwaye ingaqhuba naphi na ukusuka kwi-4 ukuya kwi-8 yeedola ngeenyawo zenyawo. Ngelixa, ukufaka iipheyinti kuxabisa kabini ukubeka ikhonkrithi ngexabiso le- $ 10 ukuya kwi-17 yeedola ngeenyawo. Nangona kunjalo, ukongeza imibala kunye nokufaka isitampu kwipatio yekhonkrithi kuya kuphakamisa iindleko kakhulu. Ukugcinwa kunye nokuthengiswa kwakhona kuya kongeza kwiindleko zexesha elide.
Iipeyinti zinokuba ngumceli mngeni omncinci ukufakela ngokuthelekiswa nezinye iintlobo zeemveliso, kodwa ngaphandle koku zinokwenziwa njengeprojekthi ye-DIY. Ngelixa lenza iprojekthi efanelekileyo yempelaveki, musa ukulindela ukuba ibelula kakhulu. Kwi-avareji, umnini khaya oqhelekileyo angathatha naphina ukusuka kwiintsuku ezi-4 ukuya evekini ukufaka ipatio yokuhamba, kuxhomekeke kubungakanani beprojekthi. Unokuqesha nengcali ukuba iwenze lo msebenzi kwaye kungathatha malunga neeyure ezingama-36 ukuya kuma-40 ukugqibezela ukufakwa kwepatiyo yemitha eyi-300.
Isitshixo kufakelo olusebenzayo lokuhambisa iipatio kukuxinana. Kuba ufakelo lubandakanya umaleko oluninzi lwegrabile, isanti kunye nezinto zepavumente, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba nganye ilungelelaniswe ngokufanelekileyo, igudile kwaye iqinile. Oku kuyakuvelisa uzinzo kunye nesiseko esomeleleyo esigcina i-paver patio yakho ihlala iminyaka.
Ukufakwa kwepatio patio kubandakanya la manyathelo alandelayo:
Linganisa indawo apho uza kubeka khona ipatio kwaye uyimake ngepeyinti yokumakisha emhlophe.
Susa nayiphi na ingca okanye ukhula kuloo ndawo.
Yomba indawo. Ubunzulu buya kuxhomekeka kwinani lezinto oza kuzisebenzisa. Izithuba ezityhilelwe kuphela ukugcwala kweenyawo ziya kufuna ngokubanzi ii-intshi ezi-4 ukuya kwezi-6 zezinto ezisisiseko ngelixa ezo zithwala umthwalo onzima ziya kufuna malunga nee-intshi ezili-12 zezinto ezisisiseko. Kukwanjalo nakwimimandla enomhlaba omanzi kakhulu.
Umgangatho wokulinganisa umhlaba usebenzisa isampulu yesandla okanye isixhobo esisebenza ngeplate compactor.
Beka ipatio edging kumda wepatio yakho. Qhuba i-spikes ngezinto zokuhlela kunye nasemhlabeni ukuze uzigcine zikwindawo.
Thela isiseko segrabile kwaye usidibanise kakuhle.
Phalaza umhlaba wokulala uze uwudibanise kakuhle.
Gcwalisa amalunga ngesanti yokugcwalisa.
Gcoba ipatio. Sebenzisa ukutywina okufanelekileyo kwezixhobo ozisebenzisayo kwaye usebenzise isixhobo esinconywayo ngokusekwe kwimiyalelo yezixhobo.
Iipheyinti azibekwanga nje ngokulula emhlabeni. Ukubonelela ngozinzo, ufakelo lufuna ukulungiswa kwesiseko ngaphantsi. Ipeyinti yepatio isiseko , ngamanye amaxesha kubhekiswa kuyo njenge ukuthobela, kufuneka ilungiswe kwaye isethwe ngokufanelekileyo, ukuba ayisiyiyo ipatio yakho engenakuhlala kwaye iqhekeke. Ngaphandle kwezi njongo, izinto ezisisiseko zikwanceda ukuthintela amanzi ekufunxeni kuwo.
Inkqubo ye- isiseko sezinto eziphathekayo Iiparitha zenziwe ngamacandelo amabini aphambili: izinto ezihlanganisiweyo kunye nezihlanganisi ezifanelekileyo. Umdibaniso wamaqhekeza udla ngokutyunyuzwa ilitye okanye igrabile -Umxube wegrabile enkulu, ubungakanani obumaphakathi, igrabile encinci kunye namasuntswana amahle, ukuze zichane. Umxube owahlukileyo wobungakanani begrabile uqinisekisa ukuba isiseko sihambelana. Uluhlu olulandelayo lwenziwe ngezohlwayo okanye amasuntswana amahle anje isanti esebenza njengezigcwalisi ezivala nakweyiphi na imisantsa, isenza umaleko uqine. Oku ngamanye amaxesha kubhekiswa kuko njengesanti yokulala.
Umandlalo wegrabile kunye nesanti apho iipavumente ziphumla khona kufuneka zenziwe zangqinelana ukuze kwandiswe umthamo wokuthwala komhlaba. Isiseko esihlanganisiweyo siya kunceda ukunciphisa utshintsho lwamaqondo obushushu onyaka emhlabeni, ngelixa ugcina umphezulu womgangatho. Ngexesha lofakelo, ungasebenzisa icompactor yeplate ukuqinisekisa ukuba izinto ezingaphantsi komgangatho zimiselwe ngokuqinileyo endaweni yazo kwaye zikulungele ukufakwa kwepavile.
Nalu ujongo oluneenkcukacha ngakumbi kumanqanaba aliqela e- uthotho izixhobo kufakelo lweparao:
Umhlaba Uluhlu lokuqala luhlobo umhlaba, leliphi elona nqanaba lisezantsi kulomhlathana. Umhlaba kufuneka ungaphazanyiswa ukuze ubonelele umphezulu oqinileyo. Umhlaba apho amaphepha aya kufakelwa khona unokubumbana ngokufanelekileyo kuphela ukuba unomxholo ofanelekileyo wokufuma - akufuneki ubemanzi kakhulu okanye wome kakhulu. Ungasebenzisa uvavanyo olulula lokwehla ukujonga oku ngokwenza ibhola encinci yentenetya kwaye uyiwise ukusuka kubude obuziimitha ezimbini ukuya kumphezulu othe tyaba. Ukuba ibhola iyaqhekeka ibe ngamaqhekeza amancinci, oku kuthetha ukuba ifuna amanzi amaninzi, kodwa ukuba yaqhekeka yaziziqwenga ezithathu okanye ezine zantlanu, oko kukuthi, yindlela efanelekileyo. Ukuba isigaxa asiphuli, oko kuthetha ukuba umhlaba ongaphantsi unamanzi kakhulu kwaye kufuneka womiswe ngaphambi kokudibana.
Ilaphu lempahla ye Geo - Olu luhlu luyazikhethela, kwaye ukuba ukhetha ukusebenzisa enye, le nto ibekwa ngaphezulu komhlaba osisiseko. Oku kuyakwahlula umhlaba ongaphantsi kuludwe lwegrabile ngaphezulu. Ilaphu lempahla ye-Geo linceda ukuthintela ukukhula kokhula nengca ngokusebenzisa i-subgrade kunye ne-paver ngokudibeneyo, ngelixa ikonyusa uzinzo lomaleko wegrabile.
Isiseko seGravel - Igravel isetyenziselwa ukubonelela ngamandla ukuxhasa ubunzima beepavile. Oku kubekwe ngaphezulu komhlaba okanye ilaphu lempahla (ukuba ukhetha ukusebenzisa enye). Ubungakanani begrabile efunekayo ekufakweni kwepavile kuya kuxhomekeka kubungakanani beprojekthi kunye nenjongo yayo. Xa ufaka isiseko segrabile, qiniseka ukuba awuphazamisi umhlaba osisiseko odityanisiweyo ngaphantsi.
Ungasasaza igrabile usebenzisa iharika kwaye uyihlanganise ukuze wenze indawo eqinileyo. Ukudibanisa isiseko segrabile kusebenza ngakumbi ukuba kwenziwe kwiindawo kunokuba kwenziwe yonke into ngaxeshanye.
Isanti yolala - Isanti ebhedini ngumaleko ophezulu weparati yangaphantsi. Esi sisanti edityanisiweyo erhabaxa apho kuya kubekwa khona iipavile. Unokufunda ngakumbi malunga noku ngezantsi.
Kwinkqubo yokufakwa kwepavile, isanti isetyenziswa kwiindawo ezimbini: isanti yolala kwaye i isanti yokugcwalisa .
Inkqubo ye- isanti yolala ibhekisa kumaleko wesanti obeka phezu kwegrabile xa ibhedi yeepheyiji zimbiweyo. Isanti yokulala, ihlala i-1 ukuya kwi-1,2 ye-intshi ubukhulu, isebenza njengesiqhushumbisi seepheyiji. Ngexesha lofakelo, olu luhlu lutyibilikisiwe kwaye ludityanisiwe ukuqinisekisa ukuba lutshixiwe endaweni yalo, ngaphambi kokuba iipali zibekwe phezu kwalo. Ukuqinisekisa ukuba isanti yokulala ilinganiswe ngokufanelekileyo iya kuthintela iipavile ekushenxeni nasekuqhubeni ixesha.
Esona santi silungileyo sokusetyenziswa njengendawo yokulala sibukhali, isanti erhabaxa eyimbumbulu enobukhulu obufanayo Oku kungenxa yokuba isanti erhabaxa erhabaxa ivelisa isitshixo sokuvala njengoko imiphetho yazo isila kunye ngexesha lokuxinana. Isanti ecoliweyo entle ayisebenzi kakuhle njengesihlabathi sokulala kuba zinotyekelo lokutshintsha zitshone kamva.
Inkqubo ye- isanti yokugcwalisa sisanti eyongezelelweyo ibekwa nje xa iipavile zibekwe ngaphezulu kwesanti yokulala. Isanti yokugcwalisa, njengoko igama layo lisitsho, igcwalisa izithuba phakathi kweepavumente ukwenza umphezulu. Ngaphandle kokuqinisekisa ukuba zonke izithuba zivaliwe, isanti yokugcwalisa iya kuqinisekisa ukuba zonke iipavile zitshixelwe endaweni. Ngexesha lofakelo, isanti yokugcwalisa nayo kufuneka yenziwe kakuhle. Oku kwenziwa ngokukunciphisa kusetyenziswa ithumbu lokunceda ukubapakisha kumalungu ezidibanisi.
Esona santi silungileyo sokusisebenzisa njengamacandelo okugcwalisa amalungu adityanisiweyo sesinye esinobungakanani obuninzi bokutya okuziinkozo kunye namagingxi-gingxi abukhali. Omnye umzekelo olungileyo kakhulu wale ntlambo ihlanjwe ngumlambo. Isanti eninzi yokulinganisa okuziinkozo iyanceda ukuqinisekisa ukuba onke amalungu, nokuba angakanani na, avaliwe kwaye ikwavumela ukwanda kwendalo ngenxa yotshintsho lobushushu. Imiphetho edlakadlaka nebukhali, kwelinye icala, inceda ekuqinisekiseni ukuba i-filler itshixiwe kunye ukwenza umphezulu ogudileyo. Isanti ecoliweyo entle nayo ayisebenzi kakuhle njengokugcwalisa kuba inokuba ihlamba ngaphandle kwamalungu okanye ikhukuliswe zizinto zendalo ekuhambeni kwexesha.
Ngamanye amaxesha, isanti yepolymeric okanye isanti eninzi isetyenziswa njengenye indlela yokugcwalisa amalungu ngokudibanisa. Isanti ye-Polymeric luhlobo lwesanti entle eyenziweyo enezinto zobunjineli, izongezo kunye nepolymer ebophelelayo esebenzayo. Ukunciphisa okanye ukuveza isanti ye-polymeric emanzini kusebenze i-arhente yokubopha eyenza isanti yomelele kwaye idale umphezulu oqinileyo wokumelana namanzi. Isanti ye-polymeric yesanti inesakhono sokuziphilisa njengoko ithamba kancinane ngexesha lemvula okanye xa ivezwe kukufuma okungaphezulu. Isanti eyenziwe ngezinto ezinokwenziwa inika ukuxhathisa ekukhuleni kokhula kwaye ithintele ukungqubana kwezinambuzane phakathi kwamalungu adibeneyo. Ezi zizathu, kunye nothintelo oluphuculweyo lokhukhuliseko kunye nomonakalo zenza isanti ye-polymeric isanti efanelekileyo yokugcwalisa kunesihlabathi esiqhelekileyo.
Inkqubo yokuhambisa amanzi ayinakuba yenye yezinto zokuqala ozibeka phambili ekucwangciseni ipatio yakho entsha, kodwa oku kuyakuphucula ukusebenza kwayo kwaye kwandise ixesha lokuphila kwayo.
Inkqubo yokuhambisa amanzi iya kunceda ukususa nayiphi na intsalela yamanzi kwipatiyo yakho. Nakuphi na ukwakhiwa okuvela emanzini agqithisileyo, nokuba kungavela kwizinto zendalo ezinje ngemvula okanye kumthombo owenziweyo, kunokubangela umonakalo kwipatiyo yakho xa kungaphendulwanga ngayo. Ngaphandle kokuseta okufanelekileyo, amanzi anokuphinda abuyele kwisiseko sakho kwaye abangele ukhukuliseko. Ukuma kwamanzi kunokubangela ukuba yonke indawo yepatio yethu ingatyhileki. Inokuba yindawo yokuzala izinambuzane ezinokonakalisa umhlaba wakho.
Zininzi iindlela onokuthi uwachithe ngokufanelekileyo amanzi kwipatiyo yakho. Apha ngezantsi kukho iinkqubo zokuhambisa amanzi zepatio onokuzama ngazo ekhaya:
Isiseko esizinzileyo nesimanyane kakuhle - Isiseko sepatio yakho yepavile ngowona mthombo uphambili wokuhambisa amanzi. Ngapha koko, isiseko esibekwe ngokufanelekileyo kunye negrabile edityaniswe kakuhle kunye nesiseko sesanti ngumgca wakho wokuqala wokuzikhusela kulwakhiwo lwamanzi.
Isanti kunye negrabile ezingezantsi kwepavile zakho zinceda ekujikelezeni kwamanzi kuloo ndawo. Ngaphambi kokuba ukufuma kufikelele kwisiseko, kuya kudlula kuqala entlabathini phakathi kwamalungu adibeneyo. Ukuba isanti kunye negrabile ayidibananga kakuhle, amanzi anokuntywila phantsi kwamagunya okanye inokuhlamba isanti, ibangele ukuba iipavile zitshone.
Ithambeka - Ukusebenzisa njengethambeka yenye yeendlela ezilula zokukhupha amanzi kwisiseko sepatio yakho. Ukuhambisa ngokufanelekileyo amanzi kude nepatio yakho, isiseko kufuneka sifakwe kwi-1/4 intshi kwinqanaba ngalinye lomgangatho wepatio. Ukuba ithambeka lenziwe ngokuchanekileyo, ukutsalwa kwendalo ngomxhuzulane kuyakunceda ukuhla kwamanzi ngokulula kwaye kuthintele ekwakheni.
Umbhobho wokuhambisa amanzi - I-patio drain eqhagamshela kumbhobho wokuhambisa idla ngokufuneka ukuba umhlaba wakho ubambe amanzi kwaye awukhupheli msinyane. Oku kwenziwa rhoqo kusetyenziswa ipayipi yePVC enemingxunya ezantsi. Umbhobho ungcwatywa phantsi kweepheyiji kwaye uphumela kwindawo eya kuthi iphathe ukuphuma. Ungalathisa ukuhamba kombhobho wedreyini ukuya apho ufuna ukukhupha amanzi.
I-Paver Edging yiplastiki eqinileyo okanye izinto ezenziwe ngokutsha ze-vinyl ezibekwe kwiziphelo okanye kwimida yeepatio okanye iindlela zokuhamba ezenziwe ngeepavili. Ukuhlelwa kwepaver kuyafana nokujika okuguquguqukayo kweplastiki okusetyenziswa kwizityala, imihlaba kunye nengca, umahluko kuphela kukuba libakala lekontrakta okanye imveliso enzima. Ihlala ithengiswa kwimiqolo emide kwaye iza ubude beenyawo ezi-6.
Ukuhlengahlengiswa ngokwesiqhelo kubekwa phantsi emva kokuba isiseko se paver okanye igravel idityanisiwe. Isebenza njengomda ukugcina isanti esisiseko kwindawo njengoko ithululwa. Oku kusebenza njengesikhokelo njengoko isanti isasazekile kwaye ilungelelaniswe. Ukuhlelwa kwepaver akuncedi kuphela ukuhambisa ukufakwa kwepavity kodwa kukonyusa nobomi bePatio, ngelixa kuthintela isiseko sesanti ekuhlambekeni endaweni.
Ukufakwa kwe-paver edging kuhlala kwenziwa ngokuqhuba i-nylon camera spikes ngezinto ezijikelezayo nasemhlabeni. Uyilo lwepatio egosogoso, iithebhu zokudibanisa kwizixhobo zokuhlela zisikiwe ukuyivumela ukuba igobe kwaye ithathe imilo egobile.
Ngokwesiqhelo, ufakelo lwe-paver edging luphambili ukuba iipavile zisetiwe ngesanti. Nangona kunjalo, uninzi lweekhontrakthi zicebisa ukusetyenziswa kweparao paver edging, nokuba yeyiphi na iprojekthi, kuba bayanceda ukwenza ipatio ukuba izinzile kwaye ihlale ixesha elide.
Iiparaver ze Paver zilondolozo oluphantsi, ngaphandle kokuba yakhiwe ngokufanelekileyo ngesiseko esizinzileyo kwaye ukuhleleka kusendaweni. Nangona kunjalo, kukho ezinye iingcebiso zokhathalelo onokuzisebenzisa emva kofakelo ukuze zenze ukuba zihlale ixesha elide.
Isondlo kanye ngonyaka Ukucoca nzulu kuyacetyiswa kube kanye ngonyaka ukususa nakuphi na ukungcola okwakhiweyo. Ukucoca ipatio ngesicoci esincinci usebenzisa ibrashi yokukhuhla kuya kususa nabuphi na ubumdaka kunye nenkunkuma kwiindawo zakho zepatio. Ungasebenzisa kwakhona i-washer yoxinzelelo ukuba ufuna ukwenza ipatio yakho ibonakale intsha, kodwa ke lumka uyisebenzise kuba isanti phakathi kweepavita zakho inokonakala.
Isondlo qho emva kweminyaka emibini ukuya kwemihlanu - Ukugcinwa kweepatio zeeparaver kuyo yonke iminyaka emibini ukuya kwemihlanu kuxhomekeke kuhlobo lwesanti esetyenzisiweyo ngexesha lofakelo. Kwiipatiyo ezakhiwe ngesanti ye-polymeric, kuya kufuneka uyitshintshe isanti rhoqo emva kweminyaka emibini ukuya kwemihlanu. Oku kuyakufuna ukususa yonke isanti endala kunye nokufaka isanti entsha.
Kwiipatiyodi ezakhiwe ngesanti kunye nesitywina, kuyakufuneka uphinde ufake isicelo sokutywina kube kanye emva kweminyaka emibini.
Isitywina se paver sisixhobo, esifana nengubo ephezulu esetyenzisiweyo kwizibiyeli emva kofakelo ukubanceda ekubakhuseleni bangafumani balahle, balahle umbala kunye nokuguga. Ukutywina iipavili zepati kuluncedo kuba kuqinisekisa ukuba ubuhle beepavita zakho zigcinwa kwaye zibenza ukuba zihlale ixesha elide. Iipavile ezingatywinwanga zithande ukhukuliseko lomhlaba, ukungunda kunye nokungunda, ukukhula kokhula kunye nombala. Itywina olikhethileyo liya kuxhomekeka kwi uhlobo lwepatio izinto onazo.
Abavali beepatio zePatio bahlala beza ngeendlela ezintathu:
I-Luster yendalo - Olu hlobo lwesitywina lonyusa ukubonakala kwendalo kwamatye abekiweyo. Ngokungafaniyo nezinye iindidi, oku akuyitshintshi imbonakalo yeepheyinti ngokuqaphelekayo kodwa kusabonelela ngalo lonke ukhuseleko. Kukuhlala ixesha elide kweentlobo zokutywina.
Ukuphucula umbala Ivelisa ukujongeka okuhle okumanzi, olu hlobo lwesitywina lwenza ukuba iipavers zikhazimle kwaye zinamandla amakhulu okuphucula umbala. Isitywina sihlala ixesha elincinci kunezinye iintlobo kwaye siya kufuna ukuphinda sisebenzise kwakhona.
Ukujongwa kwe Satin Ivelisa ukujongeka okumanzi, olu hlobo lwepeyinti yokutywina yonyusa umbala kancinci, kwaye inike ukujonga kwesatin.
Ukuba uceba ukwenza i-DIY patio paver, indlela elula yokwakha kukusebenzisa izixhobo zeepatio paver. Iikiti zeepatio zePatio zilungele abaqalayo kunye nabo banamava amancinci kulwakhiwo kuba beza nayo yonke into oyifunayo ukwakha ipatio yakho eyothusayo.
Ikiti yokuhamba ngepatio eqhelekileyo iza nemiyalelo, iitemplate zoyilo, kunye nezinto zokucheba kwangaphambili. Ziza kuyilo olwahlukileyo kwaye azisetyenziselwa kuphela iipatios kodwa kunye nemivalo yangaphandle, iikhitshi, iindlela zokuhamba okanye iidesika. Unokufumana kwakhona iikiti zepatio zeparike kwiimarike eziza kunye nommandla womlilo. Iikiti zokuhambisa iipatio ziyafumaneka nakweyiphi na ubungakanani.
Ukuba ucwangcisa ukwenza ipatio usebenzisa i-patio paver kit, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukujonga umthengisi othembekileyo. Umthengisi uya kukubuza iimfuno zakho kunye nobukhulu bepati yakho. Ngoku unokuyila ikiti yakho-chaza uyilo olifunayo, khetha iinkcukacha kwaye wenze ngokwezifiso amanqaku. Nje ukuba ukugqibe oku, umthengisi uya kukuthumelela uluhlu lwezinto kunye nekoteyishini. Ukuba oku kuyazifezekisa iimfuno zakho, ngoku unoku-odola ikiti esele ikhethwe kwaye oku kuya kuhlala kufikile kwiveki ezi-2 ukuya kwezi-3. Landela nje imiyalelo kwikhithi yakho kwaye uqalise ukwakha.
Iikiti zePatio Paver zibiza umndilili weedola ezingama-300 ukuya kwi-1, 000 - kuxhomekeke kubukhulu, imilo kunye noyilo. Ziyabiza kakhulu xa kuthelekiswa nokuthenga iipavita kunye nezinto ezizodwa. Ngaphandle kwekiti, kuya kufuneka uphinde unike uhlahlo-lwabiwo mali lwezixhobo zakho ezisisiseko.
Siyathemba ukuba uyonwabele igalari yethu yeengcinga zepavivas. Sinqwenela ukuva malunga nohlobo lwakho oluthandayo lweepavita, phawula nje ngezantsi ukuze usixelele ukuba ucinga ntoni. Ukubona imifanekiso ehambelana nayo ndwendwela igalari yethu Uyilo lwepatio ebiyelweyo .
Imbonakalo yelizwe yePatio Flagstone | 2000… $ 1289.00 umthengisi ogqibelele (14) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
UMzantsi-ntshona weBoulder kunye neLitye leLandscape Rock ... $ 24.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-391 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Tensar International EarthLock Hardsca… $ 158.28 umthengisi ogqibelele (7) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Pop-Up Fire Pit | Ephathekayo kunye neLightweight | Epheleleyo… $ 119.95 umthengisi ogqibelele (1006) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Ithini ibhayibhile ngendoda nomfazi
iingoma ezilungileyo zokudanisa
isuti enxibe iimpahla zonxibe iindwendwe zomtshato
Uyicwangcisa njani ipati ye-bachelor
Umama womntwana iingoma zomtshato 2016
Kamala harris umyeni douglas emhoff